Chelsea oo dhabar jab xoogan la kulmeysa kahor kulanka Premier League ee Norwich City – Gool FM
(London) 23 Agoosto 2019. Chelsea ayaa dhabar jab xoogan la kulmeysa kahor maalinta Axada kulankooda 3-aad ay kula ciyaari doonaan kooxda Norwich City horyaalka Premier League kal ciyaareedkan.
Waxaa shaki xoogan la galinayaa in N’Golo Kante uu diyaar u noqon karo kulanka Axada soo aadan ay la ciyaari doonaan kooxda Norwich City, madaama uu dhaawac ka qabo canqowga usbuucan oo dhan.
Maadaalaha reer France ee N’Golo Kante ayaa saacadaha soo socdana wuxuu mari doonaa baaritaan caafimaad, si loo hubiyo inuu taam u noqon karo kulankan.
Tababare Frank Lampard ayaa shirkiisa jaraa’id ku xaqiijiyay in N’Golo Kante uu la xanuunsan yahay dhaawac dhanka canqawga ah, laakiin wuxuu diiday inuu cadeeyo hadii uu qeyb ka noqon doono liiska kooxda Blues ee ka qeyb galaya kulanka Norwich City.
N’Golo Kante ayaa la rumeysan yahay inuu ku dhaawacmay kulankoodii labaad horyaalka Premier League kal ciyaareedkan ay barbaraha la galeen Leicester City kaasoo ka dhacay garoonka Stamford Bridge, inkastoo uu dhameystay 90-ka daqiiqo.
Xaaladda N’Golo Kante ayaa la qiimeyn doonaa kahor kulanka Norwich City, halka Antonio Rudiger uu dhaawac ku seegayo ciyaartan, laakiin waxaa la rajeynayaa inuu soo laabto isbuuca soo socda kulanka ay la ciyaari doonaan Sheffield Wednesday.